प्रिय मित्र सर्बेन्द्र खनाल ज्यू,रबि लामिछानेलाई पत्र का*टेर निश्चित घण्टाभित्र प्रहरीको कुनै पनि कार्यालयमा बोलाएको भए के हुन्थ्यो ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/प्रिय मित्र सर्बेन्द्र खनाल ज्यू,रबि लामिछानेलाई पत्र का*टेर निश्चित घण्टाभित्र प्रहरीको कुनै पनि कार्यालयमा बोलाएको भए के हुन्थ्यो ?
प्रिय मित्र सर्बेन्द्र खनाल ज्यू,रबि लामिछानेलाई पत्र का*टेर निश्चित घण्टाभित्र प्रहरीको कुनै पनि कार्यालयमा बोलाएको भए के हुन्थ्यो ?
280 1 minute read
काठमान्डौ , पत्रकार प्रेम बानियाले रबि लामिछाने र युबराज कंडेल पक्राउ गरेको शैली प्रति अ*सन्तुष्टि जानेका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत रबि लामिछाने पक्राउ प्रकरण बारे अ*सन्तुष्टि जनाउदै आईजीपी सर्बेन्द्र खनाल संग केहि प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन् -रबिजी Rabi Lamichhane प्रकरणका अन्तर्राष्ट्रिय सवाल !!!!प्रिय मित्र/प्रिय व्यक्तित्व Sarbendra Khanal ज्यू, तपाईंलाई एक आईजीपीका रुपमा भन्दा व्यक्तिगत रुपमा केही जानकारी । तपाईंको निष्ठा, कार्य कुशलताको खुब ठूलो प्रशंसकले उसको ज्ञान र अध्ययनका आधारमा तपाईंलाई नितान्त व्यक्तिगत दुई’टा प्रश्न वा सुझाव प्रस्तुत गरेको सम्झिनुहोला:
नम्बर १, त्यो भिडियो कसरी बाहिर आयो ? अ*नुसन्धानमा अ*ब्बल नेपाल प्रहरीमा तपाईंको अ*ब्बल अनुभवलाई सा*क्षी राखेर सोधिएको प्रश्न हो यो । आ*त्मह*त्या गरेको व्यक्ति भएको कोठा प्रहरीले फो*डेको हो, त्यो कोठामा सवभन्दा पहिला प्रहरी छि*रेको हो । सबै प्र*माणहरु (मोवाइल, कागजात वा अन्य सबै) प्रहरीले नै सं*कलन गरेको हुनुपर्छ/हुनैपर्छ । त्यसपछि सवै स्रोत र सू*त्रहरु गो*प्य राखेर सुक्ष्म र गो*प्यरुपमै अ*नुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यो भिडियो कसरी बाहिर आयो ?
यतिसम्म कि त्यो भिडियो आफन्तको हातमा पनि पुग्न सक्दैन, मिल्दैन र सम्भव छैन । किनकि यो प्रहरी अ*नुसन्धानको विषय भइसकेको थियो । सबै स्रोतहरु प्रहरीको नि*यन्त्रणमा हुनुपर्छ । संसारको कुनैपनि प्रहरी सं*गठनले वा अ*नुसन्धानमा सं*लग्न कुनैपनि नि*कायहरुले यस्तो गर्न सक्दैनन्, यो कसरी भयो ???? त्यो भिडियो प्रहरीको नि*यन्त्रणबाट बाहिर कसरी गयो ? यसको जवाफ प्रहरीले मात्रै दिनसक्छ । अ*नुसन्धान विषयमा यो एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न हो ।
नम्बर २, रबि लामिछानेलाई पत्र का*टेर निश्चित घण्टाभित्र प्रहरीको कुनै पनि कार्यालयमा बोलाएको भए के हुन्थ्यो ? न्यू*जरुममा काम गरिरहेको पत्रकारलाई त्यो पनि डेढ घण्टापछि प्रत्यक्ष कार्यक्रम प्रशारणको तयारीमा रहेको प्रस्तोतालाई टेलिभिजन स्टेशनमै गएर प*क्राउगर्नुअघि प्रेस स्व*तन्त्रताका अन्तराष्ट्रिय मा*न्यताहरुलाई किन भुल्नुभयो?एक मित्रवत सम्वन्धका कारण एउटा आइजीपीलाई भन्दा पनि एक आत्मीय मित्रलाई सा*दर जानकारी गराएको हो । यसले तपाईंको अ*नुसन्धानलाई अझ गहिरिएर निश्कर्ष निकाल्न सघाउने आशा लिएको छु ।
गणतन्त्रको सङ्घीयता भन्दा राजाले बनाएको ५ विकाश क्षेत्र धेरै हदसम्म
वकिलले आफ्नै रोहबरमा यसरी रिहा गर्न सक्छन् आज रविलाई !
विदेशबाट फर्किँदा नेपालीहरुले कति ल्याउन पाउछ सुन ! कति लाग्छ भन्सार – हेर्नुस
आज फेरि बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ?
सवारी दर्घटना हुदा झापामा एक किशोरी रन्जनाको मृत्यु।